Akabane Station (2nd Oct)
English • Oct 3, 2021
そして、大変 お忙しい中、ご協力してくださったカメラマンの方々、お水やお菓子などサポートしてくださった寄贈者、TTAJのボランティア、皆様にも誠に有難う御座います。 🙏🙏
2nd of October, TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Akabane Station, Tokyo.
We were able to hand out over 400 pamphlets and 400 pocket tissues from 3:00pm till 6:00 pm.
ယမန်နေ့ ၁၀ လပိုင်း ၂ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Akabane ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ညနေ ၃ နာရီမှ ၆ နာရီ အတွင်းလက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၄၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။